UTyerry Baudet kunye nekhadi lobuhlanga ngoKajsa Ollongren, oqaliswe nguKumkani Clingendael: UMartin Vrijland
Iimfene ziqhubeka ziphuma kwimikhono yangoku nje kwaye ngeli xesha liyi-Thingenry Baudet, eqaliswe yindlu yethu yasebukhosini isikolo saseClingendael, esinokudibaniswa neengcamango ezingaphezulu. Ukususela ngomhla we-1 kwiForam yeDemokhrasi (FvD) yazama ukuqalisa nge-timeline ye-Facebook ye-Martin Vrijland kwaye ndade ndaya kumntu ovela kwiqela leBaudet ukuya kwiintlanganiso. Ndandisoloko ndigcina loo nqanawa ihamba, kuba kwacaca ukuba uBaudet wayengumkhontsi olawulwayo owawufuneka abe ngumkhuseleko.
Iinkonzo zokukhusela ezinamalungu amaninzi amancedisi kufuneka zitshintshwe ngexesha elithile. Ngenxa yokuba ziyakhulelwa kwaye zisekelwe. Nangona Baudet izinto ezininzi ezibukhali uthi, kanye injongo kwendima umnatha wokhuseleko yayo. Big Data (data evela 24 7 × esweni zosasazo zasekuhlaleni, imeyile, iincoko, njl) ukuqinisekisa ukuba urhulumente uyazi kakuhle into luvo uhlala phakathi kwabantu yaye amandla uyazi ukuba abambe ngayo kuyo. Ngenxa yoko igama elithi 'ukhuseleko lomnatha'. Ukuba iqela elibalulekileyo kwilizwe likhule likhulu, ufuna inqanawa enkulu. Kwaye xa bonke abantu belo mkhombe, uthumela umkhombe ngendlela ofuna ngayo.
Umphathiswa weBlitzkrieg umsebenzi uKajsa Bilderberg Ollongren ngoku unokufumana umsebenzi, ngoku umntu ovela kwiqela leBaudet, ilungu Yernaz Ramautarsing, ibhunga likhetho lomasipala lonyulo e-Amsterdam, lenze isigwebo somthetho. Wayeza kuthetha ku-2016 ukuba kukho ubudlelwane phakathi kohlanga kunye ne-IQ. 'Ndiya kuthanda ukuba yinto eyahlukileyo, ukuba abantu abamnyama babeyizixhobo ezinengqiqo, ukuba iSurinamese ibe ne-IQ ephezulu kwi-world', wathetha ngodliwano-ndlebe kwintengiso yeBrandpunt. "Kodwa akunjalo." I-go-getter ka-Kajsa, ngoko unokuthetha oku okulandelayo (ngaloo ndlela de Volkskrant):
Ulwahlulo lwangoku nje lwe-populism luyaqhubeka apho i-Wilders iyeka khona. Iqela le-Baudet libonakala lijongana nelinye lezithuba ezimbalwa endizibandakanya kuzo njengenkululeko eqhubekayo: ukuthetha ngeentlanga kwiingxoxo zezopolitiko.
'Ngokutsho komphathiswa, uThierry Baudet' waqhubeka 'kweli veki. Inkokheli ye-FvD ayizange ilahle iitatimende zamalungu omcimbi kwingxoxo Yernaz Ramautarsing, ibhunga likhetho lomasipala ukhetho lonyulo lwase-Amsterdam ngoMatshi.
Yileyo ndlela isebenza ngayo kunye neendlela zokukhusela. Ubavumela ukuba bashumayele "inyaniso" eninzi; izinto eziphila ngaphantsi kwabantu. Emva koko ubambisana nabo kwizinto ezigqithiseleyo kwaye apha , umsebenzi owenziweyo. Wonke umntu obalaseleyo sele sele esecaleni lesicatshulwa. UMartin Vrijland wayesele esetyenziswe nge-intanethi ngumqeshwa waseburhulumenteni uJeror Hoogeweij (emva kokungenelela kwezonyango kunye nokunyanga kwama-hormone ngoku Naomi Hoogeweij kubizwa); ukwenzela ukuba umthwalo wemithwalo sele sele ushiyekile. Kodwa kukho imfuneko yokucinga kwabafundi abalulekayo kwaye ke uClingendael weza neBaudet. UPaul Clist ungomnye wemikhosi ebangela ukuba uTyerry Baudet Forum for Democracy (FvD) kunye noClingendael Adriaan Schoutowayevelele ngokubonakalayo kusekwa kweForam en UPeter van Ham.
ISikole saseClingendael sasiyi-- ngokutsho kwe-Wikipedia - eyisekwe kwi-1983 nguNgqongqoshe wezoKhuselo waseDutch. Ngokutsho kwe-Wikipedia, nangona kunjalo, isiko ezizimeleyo kwezopolitiko (akudingeki ubambe ukuhleka kwakho). I-Clingendael Institute ayizimeleyo kuzo zonke, kodwa iyisimboli esiphezulu se-propagandistic eyenziwe yintsapho yasebukhosini kwi 1982.
Umthetho we-29 Disemba 1982, ugunyazisa ukutyunjwa ngokubambisana kweNational Institute of Relationships "IClingendael"
Thina Beatrix, ngobabalo bukaThixo, uMthekazi waseNetherlands, iNkosana yase-Orange-Nassau, njl njl njl njl njl njl njl njl njl.
Bonke abaza kuyibona okanye bayayiva, bulisa! kuyenza:
Ngoko siye kuthathelwa ingqalelo ukuba kungakuhle ukuba iinzuzo uMbuso co-ekusekweni Foundation Dutch Institute of 'Clingendael' International Relations kwaye ngenxa yaloo njongo phantsi inqaku 40 ye Akhawunti zikaRhulumente 1976 (STB. 671) igunya ngokomthetho efunekayo yiyo;
Ngaloo ndlela, thina, iBhunga likaRhulumente livile, kunye nokubonisana ngokuqhelekileyo kwe-States-Jikelele, siye savunywa kwaye siyayiqonda, njengoko Sivuma kwaye siyayiqonda ngale nto:
UMphathiswa wethu wezoKhuseleko ugunyazisiweyo ukuba aqokelelane iSiseko saseNetherlands yeZizwe zoBudlelwane bamazwe ngamazwe "Clingendael".
Lo Mthetho uya kuqalisa ukusebenza ukususela ngomhla wokuqala emva komhla wokukhutshwa kweBulglet yeZenzo kunye neMigqaliselo ebekwe kuyo.
Lo mthetho ungabhekiswa njenge-Foundation Foundation Clingendael Institute.
Ukuhlawulwa kunye nokuyalela ukuba iya kufakwa kwiBulglet yeZenzo kwaye onke amasebe eenkonzo, amagunya, iikholeji kunye namagosa, nokuba ngubani oyaxhalabisa, uya kuhlala echanekileyo.
Inikwe iLeki, 29 December 1982
Ikhutshwe ngomhla wama-30 no-1 Disemba 1982
"UBaudet wajoyina i-2007 kwinkonzo yeYunivesithi yaseLeiden. Njengomfundi kunye neFP umfundi wayedibene neCandelo loMthetho. Ukuhlaselwa koMbuso weSizwe, ingqungquthela uBaudet yabhala phantsi kolawulo lukaPaul Cliteur kunye noRoger Scruton, ngokuphathelele ubunikazi belizwe, ukuhlanganiswa kweYurophu, kunye neenkcubeko ezininzi."Unokufumana kwakhona itekisi kwi-intanethi (umthombo: Wikipedia). Ngoko sinokugqiba ukuba uT Thierry waqeqeshwa yindlu yebukhosi. Kulula kangakanani ukuphonsa ikhadi lokucwasa ngokobuhlanga (nge-Yernaz Ramautarsing pawn) kwaye uthumele umkhombe kunye nabagibeli ukusuka emanzini ngaphambi kokuba i-quay igweke? Kulula kakhulu; kwakusele isicwangciso sonke. UMphathiswa uKajsa angayifaka ibhola.
Abadlali abakhulu bagcina imilenze ngokuqinile ezandleni zabo. Mhlawumbi sinokulindela ixilongo elihle kwi-clown entsha kwi-sky: URian van Rijbroek. Ngoku ubiza enye Hlola isiRashiya kuNdlu yabameli. Unokuqikelela ukuba ngubani oya kuba.
Yintoni esinokuyilindela? Siyakwazi ukulindela umdlalo kunye nesepha! Yingakho ndibize abadlali bezopolitiko 'iminyaka. Benza insipho yangempela yokuphila kuwe ogcina ukukhohlisa kwedemokhrasi ephakamileyo. Awuhlali kwintando yesininzi; ulawulwa yi-aristocracy emva kwesigqubuthelo sentando yesininzi, apho bonke abadlali abasemasimini baqeqeshwa kwaye balawulwa nguloo mfana.
UTyerry ukhona ngoku si bhengezo kwaye uya kuvikelwa yinkosi yakhe epwns Theo Hiddema. Siza kubona umbukiso! Sifuna oko kwaye siyifumana. Umboniso kufuneka uqhubeke!
Uludwe lwekhonkco lovimba: volkskrant.nl, wikipedia.org, wikipedia.org, telegraaf.nl
Umvo-mpopasho wokubonisana upheliswe kwaye akukho mpopasho oya kuhoywa
I-Netherlands ifuna ukuvakaliswa kwesibheno ukushiya i-EU, iForam yeDemokhrasi, i-NEXIT
tags: si bhengezo, Bilderberg, Clingendael, eziziimbalasane, KwiForam yeDemokhrasi, FvD, ukuseka, Kajsa, ngumphathiswa, Ollongren, URian van Rijbroek, Hlola isiRashiya, Theo Hiddema, Thierry Baudet, Yernaz Ramautarsing
3 Februwari 2018 kwi-12: 01
Igama Nice ukuba ezinye oziphethe FVD (weqonga) kunye ikhadi ubuhlanga ... mhlawumbi kufuneka ufunde nantoni subliminal Yernaz Ramautar Sing >> ngaphandle traumatizing
Akunjalo ... yinto ephezulu?
3 Februwari 2018 kwi-14: 37
Ndiyicinge kwakhona, kodwa kubonakala ngathi mna u-Alexander Pechthold kufuneka abe yi-Russian spy kwikamelo lesibini ...
3 Februwari 2018 kwi-15: 15
Ungalibali ikhonkco kunye ne-Minerva Leiden apho iBririx ilungu, ngoko banemigca emifutshane nefektri elite apho bakulungiselela abadlali babo kunye nabanye abasebenzisa abantu ukuba badlale uluntu.
3 Februwari 2018 kwi-15: 20
Kwiminyaka emininzi, u-Ollongren ube ngumphathiswa-mthunzi-mongameli waseNetherlands, nguyena owayengumkhulumeli weRutte kunye nokwandiswa kwe-aristocracy (imeko ephantsi). Kwiminyaka emininzi wayengunobhala-jikelele kwiSebe lezeMicimbi-Jikelele, ngoko ukuhamba kwakhe akunakwenzeka. Yaye ukuwa kwayo akuyi kwenzeka okanye, kuba zingaphi iivoti ngaba ngabavoti banayo?
Emva koko uthe iNetherlands yidemokhrasi ...
3 Februwari 2018 kwi-16: 30
Kodwa ewe, uninzi lwabantu luyakuthandana ukuxoxwa ... nje kuphela ukuba iqela liqhubeke.
Zonke izinto ezinzulu.
3 Februwari 2018 kwi-16: 48
Abantu (i-plebs) abanokwazi ukuba singabantu bomoya.
I-ajenda inzulu kakhulu, inja ayithandi, yintoni enye engayenzayo kunokuthi inyaniso inzulu ngaphakathi kwethu.
3 Februwari 2018 kwi-20: 23
I-Orwellogren yeDamsel kunye nayo yonke into engafanelekanga e-Jort Kelder inzima emsebenzini, yenza amathuna abo.
Wathatha inxaxheba kwizithuba ze-2006 apho wayeyi-5 kwinombolo ye-D666 ekhethwe yi-3 kuphela. Yena ngokwakhe ufumene iivoti ze-3174 - kungekudala i-5% yesikhundla sepalamente kwaye ngoko unako ukukwenza:
UNobhala Jikelele wezeMicimbi Jikelele
- Alderman waseAmsterdam
- UMphathiswa we-Interior (AIVD, phakathi kwabanye)
- Sekela UNdunankulu
- kwaye i-Bilderberger
IKhabhinethi kunye ne-AIVD ilahlekisa abemi
Isekela likaNdunankulu uDe Jonge kunye ne-AIVD banikezela ngolwazi oluchanekileyo ngamagunya e-AIVD. Abanye abaxhasayo kumthetho omtsha wokumisa i-CDA njengenkokeli ye-CDA uBuma kunye nochwepheshe bezokhuseleko uRob de Wijk baxelele nokunyaniseka. Bathi i-AIVD ayikwazi ukuphulaphula "ikhebula" ngeli xesha. Yiyo into engeyona nto.
Nabani na ocinga ukuba izisombululo zifumaneka kwizombusazwe kunye nabasebenzi baseburhulumenteni apho bafungela ukuthembeka kuThixo (yiyiphi?) Kwaye isikhulu esingaziqondi kakuhle.
I-Beatrix 80 ekufuneka ibhiyozwe ????
4 Februwari 2018 kwi-12: 05
Into enomdla kukuba uTerry wenza isikhalazo phantsi kwegama elithi "ukunyundela".
Sathetha malunga nexesha elidlulileyo, bathetha ngokunyelisa ukuthulisa abantu.
Ngamanye amagama; Abantu kufuneka baqhelaniswe nembono yokuba banokugwetywa xa behlambalaza umntu ngengozi.
Ukwandisa ukuzincoma phakathi kwabantu.
6 Februwari 2018 kwi-21: 16
U-Aristocrat kunye nomfazi oyintombi ka-Orwellongren uyaqhubeka nokunyamezela kwindlela yakhe ye-NWO Bilderberg. Ndimele ndimnike iinwele ezingenasiphelo kwaye azikwazi ukuphelelwa isicwangciso sakhe se-STASI. Emva kweMpumalanga Stratcom, abahleli abakhulu baya kuthetha naye, unenjongo kangakanani xa uthetha ngeendaba zendaba. Eyoyikisayo kakhulu ...:
Umbutho kunye nomfundisi u-Ollogren baxoxe ngeendaba ezibuxoki
UDolf Rogmans - Kuthunyelwe ngakwesibini ngoLwesibili 6 Februwari 2018, 13: 49
IZINDABA UMphathiswa uKasja Ollogren we-Interior noBudlelwane boBukumkani kunye namalungu amathathu eMbutho wabaHleli abaziintloko baye baxoxa ngeendaba ezikhohlisayo kunye nemiphumo yayo ngoMsombuluko ntambama. Injongo yayikukufumana. Iziphelo phofu bungaphumi, kodwa naye na injongo, wathi umbutho usihlalo Marcel Gelauff we email kumalungu oluntu.
UGelauff wahamba noHans Nijenhuis noGert-Jaap Hoekman, umhleli omkhulu we-AD kunye no-Nu.nl ngokulandelanayo.
Phakathi kwabanye, iindaba fake Task Force yeKhomishoni yaseYurophu, yokwanda ukusetyenziswa kwegama elithi iindaba fake, nayo ngengqiqo ngokubanzi yokugatya ezinye izimvo ngaphandle zabo kunye nefuthe lazo ubuntatheli kwaxoxwa.
IPhulo Nu.nl, Leiden University kunye Facebook nxamnye iindaba fake, ukuma kunye nezenzo iinkampani ezifana Facebook ne Google (nje iqonga zobugcisa okanye ukwandisa indima lomshicileli), ukubaluleka elubala kwicala likarhulumente (kunye neenkqubo ze-WOB ezungeze i-MH17 njengomzekelo), umphumo ukuba iindaba ezimbi zikhuthaza ukuxubusha kwangaphakathi kunye nokucinga kunye neemfuno zokubhaliweyo ukuba zenze ngcono kwaye zibukhali kunanini ngaphambili.
Akunakho ubungqina 'bezenzo zombuso' Ndicinga ukuba ungumdlali welizwe wena.
7 Februwari 2018 kwi-17: 33
Ziyintoni kwakhona ezibonakalayo e-Brussels, ezihlaselayo le bah. Bafumana phi i-ff kwizigidi zabantu ukuba baqaphele into entsha. Ukubuyisela amaxesha amandulo ...
Igama: Iqela leNgcaciso yeNqanaba eliPhakamileyo kwiNdaba zeNkohlakalo (E03567) esebenzayo
Umhla weSihloko ovulekileyo ukuhanjiswa kwewebhu
I-07 / 02 / 2018 I-2nd nganiso Ayikho
Iqela / iinqununu: Iqela leNgcaciso yeNqanaba eliPhakamileyo kwiNdaba zeNkohlakalo (iqela eliphambili)
Umhla / Ixesha: 07 / 02 / 2018
Isihloko: Intlanganiso ye-2nd
Ukusasazwa kwewebhu: Hayi
Amadokhumenti: Akunakho amaxwebhu ahlanganisiweyo kule ntla nganiso
BartSch wabhala wathi:
8 Februwari 2018 kwi-14: 22
Abantu babonakala bexolisa kwi-FvD:
9 Februwari 2018 kwi-12: 25
Hayi kakuhle, kodwa mhlawumbi inxalenye yeso nqanawa, eqhutyelwa ngaphandle kolawulo, elunxwemeni. Ngokwenene kuyindlela eyaziwayo ukuba ukhangeleka kwimbali yamaxesha adlulileyo.
« Ubungqina bokubungqina: iiflegi zonyani ziphakanyiswa ukupheliswa kwemali
I-DWDD, VI, van der Gijp & Derksen kunye nokuguqulwa kwe-VTM intatheli yaseBoudewijn esuka eSpilbeeck ukuya eBo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.415.151
Stef Broekema op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
Niels Rabius op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
Riffian op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
SalmonInClick op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?